မတ်သာင်: January 2008
စိတ်ကူးကြိုးသီ ဟံသာဝတီ ......
ပုံဖော်လို့မှီ ရာမညတိုင်းပြည် .....
ဟသာင်္တိုင်းပြည် မွန်ဌာနီ .......။
Posted by မတ်သာင် at 9:28 PM No comments:
History of Syriam (7)
ခြင်္သေ့အမောက်ရှိရာ၊ ဒေးဝန်းတံခါး။ ခြင်္သေ့နားရှိရာ၊ မြင်တင်တံခါး။ ခြင်္သေ့လည်ချောင်းရှိရာ၊ ဆင်ထွတ်တံခါး။ ခြသေ့င်္လည်ဆစ်ရှိရာ၊ ဒလကုံးတံခါး။ ခြသေ့င်္လက်ရှိရာ၊ ဇင်ပြွန်းကုံးတံခါး။ ခြသေ့င်္ချက်ရှိရာ၊ လက်ဝဲဘယတံခါး။ ခြင်္သေ့အမောက်ကကို၊ လည်ဆစ်ရောက်ထပ်လောင်းတည်သည်။ မြို့မှာ မြောက်ကို မိတ်သာတံခါး။ အရှေ့မြောက်ကို၊ ပင်လယ်တပ်တံခါး။ အရှေ့၊ ရှမ်းတံခါး။ တောင်ကို ၀က်သားတံခါးဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည်။ ပါဒမြို့ကို၊ အရိန္ဒရာဇာမင်း ပြုသည်ကာလ။ ငသံလျှင်မင်း လုပ်ကြံ၍၊ အရိန္ဒရာဇာကို အောင်မြင်လျှင်၊ ပါဒမြို့တွက်ရှိသည့်ဗိုလ်လူအပေါင်းတို့ကို သိမ်းရုံး၍၊ ဥတ္တရင်္ဂကုံးမြောက်၊ သီဟဒီပကျွန်းတွင်၊ မြို့နန်းတည်ထောင်ပြုစုသည်။ ငသံလျှင်မှစ၍၊ ဘောဂသေနမင်းတိုင်အောင်၊ သံလျှင်မြို့၊ ပါဒမြို့ ၂ရပ်တွင်၊ မင်းပေါင်း ၃၆ဆက် စိုးအုပ်သည်။ ပါးမြို့တွင်၊ အဆက်ဇေယသေညမင်း။ အဆုံးကား ဘောဂသေညမင်းတည်း။ ထိုမင်းလက်ထက် သထုံးမြို့တွင်၊ ဂျွန်းစစ်သည်တို့ ရှစ်မျက်နှာဝန်းရံရှိသည်အခိုက်၊ သမိုင်းစကားကျွန်းမှာ၊ ၀ံဘိုငှက်ဥတွင် ပေါက်ဖွါးသည့်သူငယ်တောသားကလေး ဆက်ရာတွင်၊ သထုံးမင်း ရ၍၊ ထိုလေးနှင့် ဂျွန်းစစ်သည်တို့ကို အောင်မြင်သည်။ တောသားငယ်လေးရှင် ကျေးဇူးကြီးပေသည်ဟု၊ သထုံမင်းက သ္မီးတော်သုဝဏ္ဏဒေ၀ီကို၊ အမတ်ကြီးတယောက်နှင့် အချွေအရံအစုံ၊ သဘောင်္ ၇စင်း၊ ရဲမက်လက်နက်ကိုအများ ပေးအပ်၍ ထိမ်းမြားစိမ့်မည် ပို့စေသည်။ သမိုင်းစကားကျွန်းသို့ ရောက်လျှင်၊ တောသားလည်း သထုံမင်းသ္မီးအရှိန်ကို မခံဝံ့၍ ထွက်ပြေးလေသည်နှင့်၊ အမိအဘအသိုက်ဖြစ်သော ကညင်ပင်ဖျားသို့ တက်လေသည်တွင်၊ ကညင်ပင်ထက်က ကျ၍ အနိစ္စရောက်လေသည်ကို၊ သထုံမင်းသ္မီးသုဝဏ္ဏဒေ၀ီ သင်္ဂြှိုဟ်ပြီးလျှင်၊ မယ်တော်ခမဉ်းတော်ကထိမ်းများသည့် လင်သင်္ချိုင်းအရပ်မှာ မြို့တည်စေတော့မည်။ မယ်တော်ခမည်းတော်အထံသို့ မပြန်ပြီဆို၍၊ ကြခတ်ဝါး ၇ထပ်စိုက်ပြီး၍ နေလေသည်။ ဤအကြောင်းကို၊ သံလျှင်ဘောဂသေနမင်းကြီး ကြားလျှင် တိုက်လာ၍၊ သုဝဏ္ဏဒေ၀ီကို ရသည်နှင့် မိဖုရားအရာ မြှောက်သည်တွင်၊ ပဋိသန္ဓေရှိ၍ နေ့လစေ့သည်ကာလ မီးမဖွားနိုင်သောကြောင့် အနိစ္စရောက်သည်။ သင်္ဂြှိုဟ်သည်ကာလ၊ ဘုန်းပါရမီရှိသူ ဖြစ်၍၊ အမိဝမ်းတွင်းက မီးမလောင်းခင်၊ စင်လွင့်ထွက်လာသည်။ သူငယ်မင်းသ္မီးကို၊ တရိရင်္ဂမြို့အနောက်ကုံးတခုတွင် တပင်တိုင်နန်းနှင့်၊ ၀င်း ၇ထပ်၊ အမတ်ကြီး ၂ယောက်၊ ရဲမက်ဗိုလ်ပါ၊ ကိုယ်ရံအများနှင့် စောင့်နေလေသည်။ ထိုသူငယ်မင်းသ္မီးကို၊ မွေ့နွမ်းဟူ၍ ခမည်းတော်က အမည်သမုတ်သည်။ ထိုကုံးကိုလည်း ယခုတိုင် ရှင်မွေ့နွမ်းကုံးဟူ၍ တွင်သည်၊ ယင်းနေ့မှ စ၍၊ ပဋိသန္ဓေနှင့် သေလွန်သည်မိန်းမတို့ကို၊ အမိဝမ်းက သူငယ်ကို နှုတ်ယူပြီးမှ သင်္ဂြှိုဟ်စေ ပြဋ္ဌာန်းသောကြောင့်၊ ယခုတိုင် ကိုယ်ဝန်နှင့် သေလွန်သူမိန်းမတို့ကို၊ ၀မ်းကို ခွ္ဂဲ၍ သူငယ်ကို ထုတ်ပြီးမှ သင်္ဂြှိုဟ်သည်။ ဒလမြို့လည်း သံလျှင်မြို့ကျေး ဖြစ်သည်။သံလျှင်မြို့တွင် ရှင်မွေ့နွမ်းခမည်းတော်လက်ထက်၊ မင်းဆက်ကုံသည်နှင့်၊ ဟံသာဝတီက မြို့စောင့်မြို့နေသား ခန့်ထား၍ စောင့်နေစေသည်။
Posted by မတ်သာင် at 6:49 PM No comments:
Incoherent Meaning of Independence and Four Definitions to Practice
Today is Burma’s Independence Day. Burma gained her independence from the United Kingdom on January 4th of 1948. This is 60th anniversary.
Sound’s great. Isn’t it?
The ‘independence’ means nothing for the Burmese people. No one has civil rights, civil liberty and freedom. After sixty years after Burma’s independence, the country turns into one of the poorest countries in the world and its fifty million people become hostages in their own country by the military governments. People are not only poorer by physically, but also morally. Especially, non-Burman nationalities have been more suffering under the Burmese military rulings.
Let us takealook on some written documents of government and today’s incisive realities.
Notes are taken from the Constitution of the Union of Burma (1947). (Red lines are from the constitution.)
Rights of Equality:
“My son can never be an army officer in Burma because I amaKaren.”
Sa San Kyi Htoo
“Last year,aBurmese general got sick. The two ancient temples were totally destroyed by the Burmese military in Mrauk-U, our ancient capital city of Arakan because the astrologists said that to rehabilitate general’s health, they need to destroy those two temples. Is that the job of brothers? Is that equality? Is that justice? It is totally brutality on not only Arakan, but also on all mankind.”
An Arakanese Youth
“I am just serving in the army because I like fighting but I know myself that I can never be an officer.”
A Muslim Soldier in Burmese Army
There shall be equality of opportunity for all citizens in matters of public employment and in the exercise or carrying on of any occupation, trade, business or profession.
“Air ticket? No. You cannot get this week. We have the places only for military specials.”
(A sense from air ticket counter)
“No. I don’t have to give those taxes and any kind of labor costs because my son isamember of USDA.”
(A sense from conversation betweenatax officer and mother ofasoldier)
(USDA means the Union Solidarity and Development Association (USDA) isagovernment-run social organization.)
Rights of Freedom:
No citizen shall be deprived of his personal liberty, nor his dwelling entered, nor his property confiscated, save in accordance with law.
“They (Burmese military) raped the girls, killed all villagers and fired the village but who cares? No Burmese medias describe, no one reveal those things because we are Shans, not Burmese.”
Nan Naw (A Shan woman who fled to Thailand in 2002)
“Last night, our neighbor was disappeared. I don’t know what he wrote but sometimes he said that he wanted to write about his opinion on the government.”
Daw Ye Ye (Rangoon)
Since then, I am always confused and incoherent about the meanings of these words. There are four definitions we, especially non-Burman nationalities have to read and practice (about the meanings of words) everyday. The definitions are taken from Longman dictionary:
1. the freedom and ability to make your own decisions and take care of yourself without having to ask other people for help, money, or permission:
2. Political freedom from control by another country
1. the right to do what you want without being restricted or controlled by someone else:
2. the state of being free and allowed to do what you want
3. the state of not being hurt or affected by something
Civil Liberty: the right of all citizens to be free to do whatever they want while obeying the law and respecting the rights of other people
Civil Rights: the legal rights that every person inaparticular country has. In the U.S., these include the right to have the same treatment whatever your race or religion is
Posted by Oo Thein Maung at 4:38 PM
Posted by မတ်သာင် at 5:02 PM No comments:
History of Syriam (6)
စိရံ တိဋ္ဌတု ဇိနသာသနံ၊ သံလျှင်မြို့ဖြစ်သည်အကြောင်းကား။ ရှေးပါဒမြို့စည်ပင်သည်ကာလ၊ အရိန္ဒရာဇာမင်းလက်ထက်၊ ပါဒမြို့အရှေ့ဘုရားကြီးရွာ၌၊ တောင်သူသ္မီးခင်ပွန်းနှစ်ယောက်တွင်၊ မည်သည့်သားသည်၊ ပဇူသန္ဓေက ဖွားမြင်တည့်လျှင်ပင်၊ ထမင်းတယောင်းမ ပုံအောင် စားသည်။ နံနက်က နှစ်ယောင်းမ၊ ည ၃ ယောင်းမကုန်အောင် တိုးပွား၍ စားသည်။ နှစ်ရှည်လများရှိသည်ကာလ၊ တနေ့လျှင် ၂င်္ခွဲ ၃င်္ကုံအောင် စား၍၊ ထိုသူငယ် ခွန်အားကြီးလှသောကြောင့်၊ သစပင်ထန်းပင်တို့ကို နှုပ်လည်း နိုင်သည်။ အမိအတို့သည်၊ ငါတို့၏သားသည် တနေ့ကို ၂င်္-၃င်္ စားသောက်၍ ကုန်သည်၊ စပါးဆန် အဘယ်မှာ ရနိုင်အံ့နည်း။ ချင်း၏ အားခွန်ဗလည်း အလွန်ကြီးလှပေသည်။ နောင်စိုးမင်းတို့အား ကြားတုံသော်၊ ငါတို့၌ ဘေးရန်မကင်းမလွတ်ဖြစ်အံ့သောအကြောင်းရှိသည်ဟူ၍၊ နှစ်ယောက်သ္မီးခင်ပွန်းတိုင်ပင်ပြောဆိုကြပြီးလျှင်၊ မိမိတို့သားကို လှည်ံဖြား၍၊ ငါတို့တွင် သူတကာနည်း၊ ကူးသန်းစီးနင်းရန် လှေတက်မရှိဖြစည်။ ငါတို့ လှေခုပ်သွားကြမည်ဆို၍၊ စားရန်ရိက္ခာနတ်၊ လှေတက်ပြင်ဆင်ပြီးလျှင်၊ သီဟဒီပကျွန်းသို့ ကူးသွားကြလေ၏။ ရောက်လျှင် ကြီးစွာသောသစ်ကို ခုပ်မည်တက်သည်တွင်၊ ယမနေပင်လုံးပတ်အတောင် ၅၀ခန့်ကို တွေ့၍၊ သားအဘနှစ်ယောက်ခုပ်ကြလေလျှင်၊ လဲမည်ဆဲဆဲတွင်၊ အဘက ဥပါယ်တမည်ဖြင့် သားကို ဆို၏။ ချစ်သား၊ သစ်လည်းသည်ကာလ၊ အမောင်ထမ်းနိုင်မည်ကို ငါအသိပင်၊ အမောင့်ပခုံးသို့ ရောက်အောင် ငါမချီမပင့်နိုင်ဖြစ်သည်။ မောင့်ပခုံးနှင့် အသင့်ခံနေပါလော့ဟု ဆို၏။ အဘဆိုတိုင်း သားငသံလျှင်သည်၊ ပခုံးတိုက်၍ အသင့်ခံနေသည်နှင့်၊ သစ်ကို အဘခုပ်၍ လည်းလျှင်၊ ဘုန်ပါရမီရှိသောသူဖြစ်သောကြောင့်၊ မသေဘဲ သစ်ကို ချီပိုး၍ မြစ်နားသို့ ထမ်းသွားလေသည်အခိုက်၊ မိဘတို့လည်း လှေသို့ အလျင်ဆင်း၍ နေရင်းရပ်ရွာသို့ ထွက်သွားလေ၏။ ထိုယနေ့သစ်ကို ခုပ်သည်အရပ်တွင်လည်း၊ ငသံလျှင် မင်းဖြစ်သည်ကာလ၊ ဘုရားစေတီ တည်သည်။ ထိုဘုရားကို တလိုင်းတို့အလို၊ ကြိုက်ဖရုရမ္မာဟူ၍ ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်လေ၏။ ငသံလျှင်လည်း အမိအဘတို့ ထွက်သွားခဲ့၍၊ တ၀ိုက်လည် မိဘတို့ပစ်ထားခဲ့သည့်အရပ်တွင် နေသည်နှင့်၊ တောဝက်တကောင်သည်၊ ပတ္တမြားပြန်ကို ငုံ၍၊ သဖန်းသီးစားမြဲဖြစ်သော သီဟဒီပကျွန်းကို ကောင်းကင်ဖြင့် လာ၍၊ ပြန်ေ့ာက်သည်ကို ငသံလျှင် မြင်လျှင်၊ ချုံပိတ်ပေါင်းထူရာက ပုန်းအောင်းကြည့်နေလေသော်၊ ထိုဝက်ကြီးသည် မိမိနေရာသို့ ပြန်ချိန်ကာလ ရောက်၍၊ ပတ္တမြားရှင်ကို ထားရာ သဖန်းပင်မြစ်အောက်မှာ ယူ၍၊ ပြန်သွားသည်ကို ငသံလျှင် မြင်လျှင်၊ နံနက် ၀က်ကြီး မလာမှီ၊ ငသံလျှင် သဖန်းပင်ထက်သို့ တက်၍၊ သဖန်းသီးကြီးမှည့်ရာ ဆွတ်ပြီးလျှင်၊ အရှေ့အရပ်သို့ ဝေးစွာ ပစ်လေ၏။ ၀က်ကြီးလည်း ရောက်လျှင်၊ ပတ္တမြားပြန်ကို ထားမြဲသစ်မြစ်တွင် ထားလေသည်။ သဖန်းသီးကို လိုက်လံကောက်စား၏။ ထိုအခိုက် ဝေးစွာသော အရပ်သို့ ပြစ်ပြန်၏။ ၀က်ကြီးလည်း လိုက်၍ ကောက်စားပြန်၏။ ထိုအခိုက် အနောက်သို့ ပြစ်ပြန်၏။ ထိုအခိုက် မြောက်သို့ ပြစ်ပြန်၏။ ၀က်ကြီးလည်း ကောက်၍ စားသည်၊ ယင်းသို့ ကောက်စား၍ ဝေးလေလျှင်၊ ပတ္တမြားကို ငသံလျှင် သမန်းပင်က ဆင်း၍ ယူသည်တွင်၊ ၀က်ကြီးလည်း ပြန်ချိန်ရောက်၍၊ ထားမြဲအရပ်မှာ ပတ္တမြားကို ငသံလျှင် သဖန်းပင်က ဆင်း၍ ယူသည်တွင်၊ ၀က်ကြီးလည်း ပြန်ချိန်ရောက်၍၊ ထားမြဲအရပ်မှာ ပတ္တမြားကို လာ၍ ယူလျှင် မရသောကြောင့်၊ စိတ်ထန်ပေါက်၍ မြေကို တူးဝှေ့ရှာဖွေသည်တွင်၊ ငသံလျှင် သမန်းပင်က ဆင်းပြီးလျှင်၊ ထိုသမန်းပင်ကို နှုပ်၍ ရိုက်နှက်သည်နှင့် ၀က်ကြီးသေလေ၏။ ၀က်ကောင်ကိုလည်း ငသံလျှင် ငင်၍ သွားရာလမ်းကို၊ ယခုတိုင် ၀က်သားတံခါးဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်လေသည်။ ၀က်ကို ခွဲနှုတ်သည့်အရပ်ကိုလည်း၊ မွန်တို့ဘာသာ၊ ကြိုက်ဖံရိုအုံ၊ မြန်မာလိုပြန်လျှင်၊ နီနီချင်းချင်းမြင်ရာအရပ်ကို ဘုရားနီကုန်းဟု ခေါ်ဝေါ်လေသည်။ ၀က်ကို ကင်၍ စားရာအရပ်ကိုလည်း၊ မွန်တို့ဘာသာ အထင်ကလိတ်၊ မြန်မာလိုပြန်ရာ၊ ၀က်ကင်ရာဟုခေါ်ဝေါ်စေသည်။ ငသံလျှင်လဉ်း ပတ္တမြားပြန်ကို ရ၍၊ ငါသည် လူသားဖြစ်သည်၊ တောအရပ်တွင် အမြဲနေနိုင်မဉ်မဟုတ်၊ လူရှိရာသို့ သွားမှ သင့်မည်စိတ်က အောက်မေ့၍ ကြံစည်နေစဉ်တွင်၊ ရန်အောင်မြင်ကုံးက ရှင်ရေဿံသဉ်၊ မီးခိုးကို မြင်လေ၏။ ထိုရေဿ့တို့၏အကြောင်းကား၊ ရန်အောင်မြင်ကုံးတွင် နေသော ရှင်ရေဿ့။ ကြိုက်ဒေးပရင်းကုံး၌ နေသော ရှင်ရေဿ့။ ကြိုက်ဒေးဝန်းကုံး၌ နေသော ရှင်ရေဿ့သုံးဦးတို့သည်၊ ရှေးတဘ၀က ပုဏ္ဏားဖြစ်စဉ်ကာလ၊ သိကြားမင်းသည် အစ်ကိုအကြီးဖြစ်၍၊ သိကြားမင်းလည်း ငါသည် တဘ၀က ပုဏ္ဏားဖြစ်သည်ကာလ၊ ငါ့ညီ ၃ ယောက်တို့သည် အဘယ်အရပ်တွင် ရှိလေသနည်းဟူ၍၊ သိကြားမျက်စိဖြင့် ရှုကြည့်လပ်သော်၊ ဆိုခဲ့ပြီးသောကုံးသုံးကုံးတွင်၊ ညီ ၃ ယောက်တို့ ရေဿ့ဖြစ်ကြောင်းကို မြင်၍၊ သက်လာပြီးလျှင်၊ ရန်အောင်မြင်ကုံးတွင် နေသော ရေဿ့ရှင်ဂ၀အရွယ်အထံသို့ သွား၍၊ သိကြားမင်း ဤသို့မေး၏။ ရှင်ရေဿ့၊ သည်အရပ်တွင် နေသည်ကို အဘယ်ဆန္ဒမပြည့်မစုံရှိသည်ကို ပြောပါလောဟုဆိုလျှင်၊ ငါသည် အသက်အရွယ်ကြီး၍၊ ထင်းမီးရေ မပြည့်မစုံရှိသည်ကို၊ ငါပင်ပန်းသည်ဟုဆို၏။ သိကြားမင်းလည်း၊ ရှင်ရေဿ့၊ သို့သော်ကား၊ ဤဒါးမကို သုံးဆောင်လေလော့၊ ထင်းမီးရေကို အလိုရှိလျှင်၊ ဤဒါးမကိုသာ တောင်းလေလော့။ ချင်းအလျှောက် ခုတ်ဖြတ်ဆောင်ယူခဲ့လိမ့်မည်။ ဒါးမကို ရှင်ရေဿ့အား လှူခဲ့လေ၏။ ထိုနောက်မှ ဒေးပရင်းကုံးအရပ်၌ နေသော ရှင်ရေဿ့ အရွယ် ၈၀ကျော်အထံသို့ သွားပြန်လေ၏။ ရောက်လျှင် ရှင်ရေဿ့လည်း ငါသည် ကုပ်သည်ရောဂါ ရျိသည်ဖြစ်၍၊ နွားနို့၊ ထောပတ်ကို တောင်ံတသည်၊ မရ`ုဆို`။ သိကြားလည်း ထောပတ်၊ နွားနို့လိုလျှင်လည်း၊ မြှူတာအိုးကိုသာ နွားနို့ထောပတ်ထွက်လောဟုဆို၍ စောင်းငဲ့ထားပြီးလျှင် ထွက်လိမ့်မည်။ ရန်သူနှိပ်စက်လာလျှင်လည်း ၎င်းမြှူအာအိုးကို မှောက်လိုက်သော်၊ မြစ်ကြီးဖြစ်၍ ရန်သူတို့ မြစ်တဘက်ရှိလိမ့်မည်ဆို၏။ မြှူတာအိုးကို ကပ်လှူပြီးလျှင်၊ ကြိုက်ဒေးဝန်းကုံးအရပ်၌ နေသော ရှင်ရေဿ့အထံသို့ သွားပြန်လေ၏။ ရောက်လျှင်၊ ရှင်ရေဿ့၊ သည်အရပ်နေသည်၊ အဘယ်ဆန္ဒမပြည့်မစုံရှိသနည်းဟု သိကြားမင်းမေး၏။ ရှင်ရေဿ့လည်း၊ ငါသည် ညဉ့်အချိန်ကို ပရိတ်မေတ္တာပြု၍ နေပါသဉ်ကို၊ အနောက်မြောက်ထောင့်ဝါးရုံက ဆင်တို့သည် လာ၍ နှိပ်စက်သောကြောင့်၊ မအိပ်မနေရဟုဆိုလျှင်၊ သိကြားမင်းက၊ ရှင်ရေဿ့၊ သည်စည်ငယ်ကို တဘက်က တီးလျှင်၊ ရန်သူပျောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းတဘက်ကို တီးပြန်လျှင်၊ စစ်သည်ဗိုလ်ပါဆင်မြင်းအများတို့ ရောက်လိမ့်မည်ဆို၍၊ ရှင်ရေဿ့အား၊ သိကြားမင်ကပ်လှူပြီးလျှင်၊ မိမိဘုန်သို့ တက်လေ၏။ ငသံလျှင်လည်း၊ မီးခိုးမြင်ရာ ရန်အောင်မြင်ကုံးရှင်ရေဿ့အထံသို့၊ ပတ္တမြားရှင်ငုံ၍ ပြန်သွားသည်နှင့်၊ ရောက်လျှင်၊ အကျွနုပ်သည် ဘီလူးနဂါးမဟုတ်၊ လူသားစစ်စစ် ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ပင်ဘုရားအထံတော်တွင် ဆီးကပ်၍ လုပ်ကျွေးနေပါရစေဟု လျှောက်လျှင်၊ ရှင်ရေဿ့လည်း နေစေ၏။ ရှင်ရေဿ့တွင် ရှိသော ဒါးမအကြောင်းအရာကို ငသံလျှင် သိမြင်လျှင်၊ ရှင်ရေဿ့ကောင်းကင်ကို ပြန်နိုင်၏လောမေး၏။ ရှင်ရေဿ့ကလည်း ငါသည် ဈာန်မရ၍ မပြန်နိုင်သေးဆို၏။ ငသံလျှင်က ပတ္တမြားပြန်ကို ငုံ၍ ကောင်းကင်သို့ ပြန်နိုင်ကြောင်းကို ပြစားလေ၏။ ရှင်ရေဿ့လည်း ငသံလျှင်အတတ်ကို မြင်လျှင် ငါအလိုရှိ၍၊ မင်းအတတ်သည် ငါတို့ရေဿ့အတတ်ဖြစ်သည်၊ ငါ့ကို ပေးပါလော့ဟုဆို၏။ ငသံလျှင်ကလည်း အလိုရှိတော်မူလျှင် ဒါးမနှင့် လဲတော့ဟုဆို၏။ ရေဿ့လည်း စိတ်တူ၍ လဲလှည့်ကြသည်တွင်၊ ငသံလျှင်လည်း ရှင်ရေဿ့၏ဒါးမကို ရလျှင်၊ ရှင်ရေဿ့လည်ကို ဖြတ်ချေစေ၏။ ဒါးမတိုနှင့် ဖြတ်လေသောကြောင့်၊ ရှင်ရေဿ့ အနိစ္စရောက်လေသည်။ ငသံလျှင်လည်း ပတ္တမြားပြန်ကို ရမြဲရပြန်လေသည်နှင့်၊ ဒေးပရင်းကုံးရှင်ရေဿ့ မီးခိုးကို မြင်ပြန်၍ ၎င်းနည်း သွားပြန်လေ၏။ ရောက်လျှင် ရှင်ရေဿ့ မြှူတာအိုးအကြောင်းအကျိုး သိမြင်၍ ၎င်းနည်း ပတ္တမြားပြန်နှင့် လဲလှည့်ပြီးလျှင်၊ ရှင်ရေဿ့ကို ဒါးမတိုဖြင့် သတ်စေ၍၊ ပတ္တမြားကို ရမြဲရပြန်လေသည်။ ထိုနောက် ကြိုက်ဒေးဝန်းကုံး၌ နေသော ရှင်ရေဿ့ထံသို့ သွားမြဲသွားပြန်လေ၏။ ရောက်လျှင် ရှင်ရေဿ့ဝယ်ရှိသော စည်တို၏ အကြောင်းအရာကို သိပြန်၍ ၎င်းနည်းတူ ပတ္တမြားနှင့်လဲလှည့်ပြီးလျှင်၊ ဒါးမတိုဖြင့် ဦးခေါင်းကို ဖြတ်စေ၍၊ နေရင်းရပ်ရွာသို့ ပြန်လေ၏။ ပါဒမြို့မင်းအရိန္ဒရာဇာလည်း၊ မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါးကိုလည်း မစောင့်၊ သာသာနာတော်ကိုလည်း စည်ပင်ထွန်းကားတောက်ပအောင် မပြု၊ ရှေးရှေးသောမင်းတို့၏ ထုံးစံကိုလည်း မကျင့်၊ ပူဇော်ကိုကွယ်ရာမြဲ ဖြစ်သော ကမ္ဘာစောင့်၊ သာသနာစောင့်၊ သမာဒေ၀နတ်မြတ်တို့မှ စ၍၊ ပြည်စောင့်နတ်၊ မြို့စောင့်နတ်တို့အားလည်း၊ ပူဇော်ပသခြင်းကို မပြုသည်ဖြစ်၍၊ ထီးဖြူဆောင်းနတ်တို့ လူရောင်ဖန်ဆင်း၍၊ ငသံလျှင်ရှိရာလာပြီးလျှင်၊ ငသံလျှင်ကို သင်သည် ခွန်အားဗလလည်း ကြီးသည်၊ ဘုန်းပါရမီအတတ်ပညာလည်း ပြည့်စုံသည်ဖြစ်လျှက်၊ အဘယ်ကြောင့် နေဘိနည်း၊ ပါဒမြို့ကို သိမ်းယူ၍၊ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်၊ မင်းလုပ်စိုးစံပါတော့လော့ဟု နတ်တို့က ချီးပင့်နှိုးဆော်လာလျှင်၊ ငသံလျှင်လည်း၊ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့် ပတ္တမြားပြန်ကို ငုံ၍၊ နေရင်ါးဒမြို့အရှေ့ဘုရားကြီးရွာ၊ မိဘတို့ထံသို့ ပြန်သွားလေ၏။ ရောက်လျှင် ပါဒမြို့ကို ငါအလိုရှိသည်၊ အရိန္ဒမာမင်းထံသွား၍ ထီးနန်းကို ငါ့အားပေးရမည်၊ မိဘတို့ကို စေ၍ တောင်းစေသည်တွင်၊ မိဘတို့လည်း၊ နန်းသို့ ရောက်အောင် မသွားဝံ့သောကြောင်၊ တံခါးဝတွင် နေ၍ ငသံလျှင်မှာ တိုင်းဟစ်ကျွေးသည်ကို၊ တံခါးစောင့်နတ်တို့ကို ရိုက်နှက်စေ၍ ငသံလျှင်အမိတို့ကို နှင်ဖြိုလိုက်၏။ ထိုအကြောင်များကို သားငသံလျှင်အား ပြောလျှင်၊ ငသံလျှင်တယောက်ထည်းပင် မိမိအားခွန်ဗလကို ကိုး၍၊ မြို့တံခါးဝသို့ သွားပြီးလျှင်၊ မိမိတယောက်ထည်းရပ်လျှင်၊ အထက်ကနည်း ဟစ်ကျော်တောင်းဆိုသည်တွင်၊ ပါဒမင်းကြီးကြားပြန်၍ အမတ်ကြီးတကျိတ်တယောက်နှင့်၊ လူပေါင်း ၅၀၀ တို့ကို စေခန့်၍၊ ဘမ်းဆီးသတ်ညှစ်စေသည်တွင်၊ ငသံလျှင်က၊ ဒါးမတို့ကို စေ၍၊ အမတ်ကြီးနှင့်တကွပါ လူတို့ကို သတ်ပြစ်သေသည်၊ ထိုအကြောင်းကို မင်းကြီးကြားလျှင်၊ စစ်ကြီးရှစ်မျက်နှာခန့်ထား၍၊ ပါဒမင်းကြီးနှင့်ဗိုလ်ပါအများ လိုက်လန်ထမ်းဆီးသည်တွင်၊ ငသံလျှင်က စည်တိုကို တီးလျှင်၊ စစ်သည်ဗိုလ်ပါအများ ထွက်၍ တိုက်ခြင်းတိုက်စေသည်ကို၊ ပါးမင်းကြီးက အားကြီးဘိ၍ လိုက်သည်နှင့်၊ မြှူတာအိုးကို ဆီး၍ မှောက်လိုက်သည်တွင်၊ မြစ်ကြီး မြစ်မဖြစ်၍ ပါဒမင်းကြီး စစ်သည်တို့နှင့် တယောက်တဘက် ရှိနေသည်အခိုက်၊ ငသံလျှင် သတိလျော့ချေသည်၊ ငါ့ဒါးမတိုကို စေ၍ ပါဒမင်ကြီးဥက္ခောင်းကို ဖြတ်စေသော်၊ အမှုများရမည်လောဟုဆို၍ ဒါးမတိုကို စေလွှတ်သည်။ ပါဒမင်းကြီးဥက္ခောင်းကို ဖြတ်စေသည်။ ပါဒမင်းကြီးကို အောင်မြင်၍ မြို့နန်းကို ရပြီးလျက်၊ မင်းအဖြစ်သို့ ရောက်လျှင်၊ ငါသူကောင်းဖြစ်ရင်း သီဟဒီပကုံးက ဖြစ်ချေသည်၊ သီဟဒီပကုံးကို မြို့တည်ထောင်ပြုစုမှ သင့်မည်ဟူ၍ ပါဒမြို့ကလာ၍၊ သီဟဒီပကုံးတါင်၊ ငသံလျှင် မြို့တည်လေသည်။ ပြို့မတည်မှီ၊ သီဟဒီပကုံးပေါ်၊ ခြင်္သေ့မြောလာ၍ တင်လေသောအရပ် ဖြစ်သောကြောင့်၊ ခြင်္သေ့ရုပ်ကဲ့သို့ သဏ္ဌာန်တူအောင်၊ ငသံလျှင် မြို့တည်လေသည်ဖြစ်၍၊ ယခုတိုင်အောင် ငသံလျှင်မြို့ဟု တည်လေသည်။ ငသံလျှင် ဒါးမကို ရလေသည်အရပ်ကို ဘုရားသည်သည်၊ ဘုရားအမည်မှာ မွန်တို့ဘာသာ၊ ကြိုက်ဝိသုံးမနိ၊ မြန်မာလို ရန်အောင်မြင်ဘုရား၊။ မြှူတာအိုးရသည်အရပ်ဘုရားစေတီမှာ၊ မွန်တို့ဘာသာ၊ ကြိုက်ဒီပရင်း၊ မြန်မာလိုရေလျှင်ဘုရား၊။ စည်တိုကို ရသည်အရပ်ဘုရားစေတီမှာ၊ မွန်တို့ဘာသာ၊ ကြိုက်မဃဂေ၊ မြန်မာလိုစည်တိုကို ရသည်နှင့် စည်တိုရဘုရားဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။ ပါဒမင်းကြီးဥက္ခောင်းကို ဒါးမဖြတ်သည်အရပ်ဘုရားမှာ. မွန်လို ကြိုက်ပြတ်စပ်တနော်၊ မြန်မာလို ပြဿဒ်ဘုရားဟု ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်သည်။ ၀က်ကြီးနှင့် သုံးဦးသော ရေဿ့၊ ပါဒမင်းကြီးသည်၊ ငါးဦးသော အသက်တို့ကို သတ်မိသည်အတွက်၊ ဘုရားငါးဆူ သံလျှင်မြို့တွင် သည်ထားလေသည်။ ဘည်အရပ်ကို ယခုတိုင် ငါးဆူကွက်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သည်။ ၎င်းပါဒမြို့ကို ချဲ့ထွင်၍ မြို့သစ်တည်၏။ ထိုမြို့သည်လည်း ခြင်္သေ့သဏ္ဌာန်တည်း။ မြို့တံခါးအမည်ကား၊ ခြသေ့င်္ပစပ်ရှိရာကို ကွမ်းသီးတံခါး၊ ခြသေ့င်္မျက်စိရှိရာကို၊ အိုးထိမ်းတံခါး၊ ငါးဆူကွက်ဟူ၍ ခေါ်လေသည်။
Posted by မတ်သာင် at 10:43 AM No comments:
What you think your priority is what is your priority. It is neither everything nor nothing but something. Just encourage yourself when no one recognizes your effort. See you have something what other does not have. Prove it to the world.
You have born to serve yourself, your nation and your world. Fight for the survival of them. Democracy? Religion? Wish to do more than them?
There is so much to discover about Mon in the past. How much do we have to tell the world about our present life? Talking about national unity? Overrating our strength? It doesn't work.
Do we really faceashortage of intelligentsia? Do we lack of natural resource? What is our disappointment? Excuse doesn't work.
To liberate our nation, where should we start? No idea? Start where you are. Do something you know, you wish, and you are enable to do it.
Should you show your love by hatred? Does it mean you cherish your nation by telling about the weakness of your partner? I hope not because it isakind of act for merely popularity.
See presidential candidates. They are good in speaking. Who knows how much they could do as they promised? We need who works. You are the one. Believe you can make it different.
We talk about the different. But most of us don't want to let the different exist. We should recognize the difference since we are different in nature. Can an alien survive among our society? it is enough if you could respect to citizen rights.
Struggling for self-determination? BuildingaFederal State? Train yourself first. Educate your community second. See how much you can work together with other ethnicities third. If you areasectarian, dictatorship is encouraged in your community and you isolate your group from the outside world, your struggle is doubtful.
Everybody has said we couldn't make it. But we believe we can. Let's try hard. Do something for someone. One day, we will be home. We have created it. We have built it centuries. We have to reclaim it.
So fly Hamsa, our sacred bird. Reach out for the sky!
Posted by မတ်သာင် at 10:20 PM No comments:
မတ်သာင်။ အကြန်၊ ဂျေန်ညူဝါရှ ၁၊ ၂၀၀၈
ဂိတုဂျေန်ညူဝါရှ(၁)၀ွံ ဒ်ှတၝဲဂကောံသင်မန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ကောံဓရီုက၀က်သႝာံတဲု နူကဏေံတေံဟေင် သင်မန်နူဝှတ်ဝုင်ဂမႜိုင် ဇက်ဂေႜဲာစိုပ်အာဍုင်အကြန်တဲု ကောံဓရီုအိုတ်ရ။ ပဲႛကောံဓရီုဝွံ သင်ဂမႜိုင် (၁၃)ဇကုတိုန်စိုပ်ကႜုင်တဲု သင်မန်မစိုပ်မံင်မှသျှဂေန်၊ မေန်ဏှသ၀်ထာ၊ ခေ၀်လ၀ှဝ်ညာ၊ ဟ၀ဲါဂမႜိုင်ဂှ် ဟိုတ်နူအခက်အခဲုဥတုရာသှတဲု တိုန်စိုပ်ဟွံမာန် ကုဪနင်ဆန်အိုတ်ရ။
ပႛဲကောံဓရီုဝွံ ပရူလုပ်ဂကောံအဝေါင်အလုဪသှဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်အရီုဗင်အ္စာဓမ္မသာတ်ဗ္တောန်ကမေႜာန်တံရောင်၊ စေ၀်ပေႝာန်ဂကောံဂှ် ဗွဲမပြဟ်သန်ဟေင် သ္ဒးကႜဲာဘာသာရောင်ဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ရ။
ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်ဘုံလ္တူအာတ်မိက်လ၀်သင်္ဘါဇကုဂှ် တုပ်စိုတ်ဗလးညးစႝးတဲု ဥက္ကဋ္ဌဂကောံသင်ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာနန္ဒသာရကေုာံ တႜဂုဏ်အ္စာရာဝိက္ဘါဇကုဂှ် ရဲုစ်ှဏာ နဒဒ်ှညးစႝးဗော်က္လေင်ဒက်ဍုင်မန်ဘုံလ္တူရောင်၊ နကုဪတႝးလိက် ယ၀်သဂကောံညးဗြၜမန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်တံ အာတ်မိက်နင်သင်္ဘါဇကုသွက်သဂွံထိင်ဒက်မင်မွဲအဲာကၞဲာယေန်သႝာင်မ္ဂး ဂကောံသင်တံတုပ်စိုတ်သွက်သဂွံဗလးဏာသင်္ဘါဇကုတဲု သွက်သဂွံရဲုစ်ှသင်္ဘါဇကုဂှ် အပ်လ၀်အ၀ုဪကုသင်ဗုဒ္ဓဘာသာမန် ဍုင်ဝှတ်ဝုင်ရောင်ဂှ် ဆက်သ္ဂုတ်သွာတ်အာ ပႛဲကောံဓရီုဂ်ှရ။
ဆေင်စပ်ကုဪသြန်ဘဏ္ဍာဂကောံတဲု သြန်ဂကောံဂှ် ပႛဲတၝဲဝွံဟေင် ညးလျိုင်ကာဂမႜိုင် သ္ဒးစုတ်ထေက်၊ တႜဂုဏ်အ္စာညာဏရံသှကေတ်တာလျိုင်တဲု တက်အာလိက်သ္ကုတ်ဒုင်ဒါန်၊ ဇၞာပ်သဘင်ဇေႝာ်မနွံ စွံလ၀်ဇံင်ပံင်သကူ၊ တၞံကောံဓရီုဇေႝာ်မနွံ သ္ဒးတွံဓရ်၊ ဇၞာပ်သင် ဒးတွံဓရ်တဲု ဓရ်တံဂှ် ပႜုပ်က၀းတႝးဓာတ်ထေက်ရောင်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။
ပႛဲတင်ကာနာနာဂှ် ကိစ္စကျာ်ဇေႝာ်စန္ဒိမာရပ်လွဟ်ကီု၊ ကိစ္စ Letter Head ဂကောံကီု၊ ကိစ္စရီုဗင်သင်မန်နူခေမ် Camp ကီု သှကႜှစှေ်အာဗီုသီုဖအိုတ်ရောင်မတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 12:33 AM No comments:
Incoherent Meaning of Independence and Four Defini...